သက်သေစုံပေမယ့် အရေယူမခံရပါ (မိုးမခပေးစာ) | MoeMaKa Burmese News & Media
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ရွှေဂူရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ Century လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ မြို့ပေါ်အသိုင်း အ၀ိုင်း ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ချဲဒိုင်ချုပ်များပါဝင်တဲ့ ဖဲဝိုင်းတ၀ိုင်းကိုဖမ်းမိပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့သူတွေက ရွှေဂူရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးဝိစာရလမ်းနေ ကိုမြင့်ဆွေ၊ ထွန်းထွန်း၊ သန်းဦးတို့အပါအ၀င် တရားခံ (၁၁) ဦးကို သက်သေခံပစ္စည်းများ၊ ငွေများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီရမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကို ဖမ်းဆီးတာကောင်းပေမယ့်လည်း အရေးမယူပဲ ပြန်လွှတ်နေသည်ကတော့ ဥပဒေနှင့်မညီညွှတ်ပါ။
ထို့ပြင် ယခင်က လယ်တီကွင်း မြို့ပတ်လမ်း ဆန်ဂိုထောင်တွင် ဖမ်းဆီးမိသည့် ဖဲဝိုင်းဆိုလျှင်လည်း အရေးယူဖို့ မဆိုထားနှင့် မည်သည့်ထိ ရောက်သည့် အရေးယူမှုကိုမျှ မတွေ့ရသေးပါ။ ယခုဖမ်းဆီးမိသည့်ဖဲဝိုင်းတွင်လည်း ရဲတွေလက်သိပ်ထိုး လိုင်းကြေးယူနေသည့် ချဲဒိုင်ချုပ် ကြီးတဦးပါနေသည့်အပြင် အဆိုပါသူမှာ နေပြည်တော်ရဲချုပ်ထိပိုင်သည်ဟုလည်း သိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယခုအမှုသည်လည်း ယခင် ရှေ့ကအမှုများကဲ့သို့ပင် မည်သည့်အရေးယူမှုမျှမရှိပဲ တဖြည်းဖြည်းပပျောက်သွားဦးမယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွှဲပါ။ ထို့ကြောင့် ယခုဖြစ်စဉ်များအား အောက်ခြေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအခြေအနေကို သမတကြီးနှင့် တာဝန်ရှိလူကြီးများ သိစေရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
7 Responses to သက်သေစုံပေမယ့် အရေယူမခံရပါ (မိုးမခပေးစာ)
mgoogyaw on October 25, 2012 at 2:32 pm
Yes, this is Burma. Where are the Equality,Democracy? All are lying, cheating, taking many advantages,Special priority. Nothing happen to those guys with good contact with Government,Army fellows. Only the stupid U.S.,E.U. and Japanese Governments,trust them and gave back all the loans,and stupid minded, many people, supports them without knowing the truth,what is happened in outside ,and to the poor civilian.Pitiful BURMA.
ခင်မောင်မြင့်(လယ်တီကွင်း) on October 25, 2012 at 8:37 pm
ဟင်္သာတမြို့ရွှေဂူရပ်ကွက် တွင်ဖမ်းမိသော
ဖဲဝိုင်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများအားနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်ပြည်ထဲရေး
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ။ဟင်္သာတမြို့ မှာ န့မည်ကြီး ဖဲဝိုင်း တစ်ခုမိတယ်
အဲဒီဖဲဝိုင်းကို ရဲကမဖမ်းတဲ့ အပြင် တခါတလေ ရံဖန်ရံခါတောင်
သွားကစားသေးတယ် အခန်းကအလုံပိတ်ပါ အပေါ်မှာ ဘေးထိုး
30000 နဲ့ လူကြီးဝိုင်းတစ်ဝိုင်းနဲ့လူငယ်ဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းပါ
ဘေးထိုးတောင် 30000 ဆိုတော့ ဝိုင်းတွင်းပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာ တွေ
းကြည့် ပါ လူက 18ယောက် ဖမ်းပြီးငွေကဖမ်းမိတုန်းက ဆာလာအိတ်
နဲ့ ထည့် သွားတာလို့ဝိုင်ပြီးကြည့် နေတဲ့ 
ရပ်ကွက်သူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။အထက်ကို ပြတာက ငွေ သုံးသိန်းနှစ်သောင်းပါ
ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေဘယ်ရောက်သွားတာလဲ အခုလဲ လူ 5ယောက်ကိုစားပွဲထိုး
ဆိုင်အလုပ်သမားဆိုပြီးလုပ်ထားကြောင်း တရားခံအသီးသီးနံမည်တွေကို ခရိုင်မှ
တိုင်း ။တိုင်း ကမှနေပြည်တော် ဖက်နဲ့ ပို့ ရာတွင် မကျန်ခဲံစေရန် နှင့် 
လူချိန်းလို့ မရအောင် န့မည်နဲ့ ရပ်ကွက်တွေကိုဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁)ကိုသန်းဝင်း အမှတ်(၉၆) မနော်ဟယ်ရီလမ်း ။ဥယျာဉ်တောင်။(၂)၀င်းသူရနိုင်
ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း ဇကာရပ်ကွက်။ (၃)မျိုးဇော်
အမှတ်(၅၁၅) ရူမ၀ (၂)လမ်း ဘုရားကြီးရပ်ကွက်။(၅)ဦးခင်စိုး
(၈)မခင်အုန်းမြင့်ဦးအောင်လှလမ်း လက်သမားရပ်ကွက်။(၉)ကျော်ဝင်း
ယက္ကန်းကျောင်းလမ်း ရွှေဂူရပ်ကွက်။(၁၀)မြင့် ဆွေ အမှတ်(၁၄၁) ဦးဝိစာရလမ်း
ရျွေဂူရပ်ကွက် ။(၁၂)ကျော်ခိုင် (အိမ်ပိုင်ရှင်)အမှတ်(၃၇)
အမှတ်(၃၇) ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း ရွှေဂူရပ်ကွက်။(၁၅)ဇာနည် ရွှေဝါလမ်း
(၁၈)ကျော်ကျော်မိုး တရုတ်တန်း တာလေးရပ်ကွက်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ 
၀န်းထမ်းတွေတင်တဲ့ နံမည်လေးတွေနဲ့ တူမတူ တိုက်ကြည့် နိုင် ရန်
ဖမ်းတယ် သက်သေခံရတဲ့ ငွေတွေကို ဖမ်းခံရတဲ့ သူလည်းအမှု့ ပေါ့ အောင်
၀ိုင်းကြီး(၁၈)ယောက်မိတာတောင်ငွေ သုးသိန်းနှစ်သောင်းဘဲ တင်တာကိုကြည့် ပါ
ကျန်တဲ့ ငွေတွေက ဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့ဟင်္သာတမြို့ ခံ
ပြည်သူများကသိစေချင်နေပါတယ် ……….နောက်လဲပြီးတဲ့ အထိ
အကယ်ဒမီမင်းသားကြီး on October 25, 2012 at 8:51 pm
ဆော်ပြီဟေ့ …….ဆော်ပြီဟေ့ ငွေမရတဲ့ သူက ရတဲ့ သူတွေကိုဆော်ကုန်ပြီ ……နံမည်တော့ သဘောမကျဘူး
ခင်မောင်မြင့် (လယ်တီကွင်း) ဆိုသူကငွေရတဲ့ သူဗျ လောလောဆယ်ဟင်္သာတမှာတော့ သြဇာအာဏာရူးနေတဲ့ ကောင်
ဒီနှစ်အတွက် အင်တာနက် အကယ်ဒမီ မင်းသားကြီးဆိုလဲမမှားပါဘူးဗျာ အကယ်ဒမီရတဲ့ အခန်းကိုသိချင်နေမှာပေါ့ (သေချာ စောင့် ပြီးဖမ်းပြီး ပြီးမှ မသိသလို ပြန်လွတ်တဲ့ အခန်းလေးပါ)သေသေချာချာကိုသရုပ်ပါတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပေးလိုက်ရတာပါ
ခင်မောင်မြင့် (လယ်တီကွင်း) on October 25, 2012 at 10:20 pm
ကိုပြန်လွှတ် on October 25, 2012 at 10:26 pm
ပြည်သူ့ဘက်တော်သား on October 26, 2012 at 3:21 am
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မဒာူပင်ခရိုင်၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်ရှိဦးစီးဒာရာရှိများ၊ ဒာကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းများသည် ဒာထက်မှ မသိဒောာင် မြို့နယ်ကျော်၊ တိုင်းကျော် ပြီး ၊ ရန်ကုန်ရှိ ကေတီဗွီခန်း၊ ဒာနှိပ်ခန်း များသို့ ရုံးပိတ်ရက်များ နှင့် ကြားရက် များတွင် ဒာလျင်းသင့် သလို သွားရောက်ရျွ် သောက်စား ပျော်ပါး နေကြပါသည်။
ထို့ဒာပြင် ဧည်ွှခံပွဲ ၊ နှုတ်ဆက်ပွဲ ဟု ဒာကြောင်းပြကာ မြို့နယ်ဒာတွင်း တွင် နာမကျမ်းသူ သက်ကြီးရွယ်ဒိာုများ ၊ပြည်သူ များကို စာနာစိတ် မရှိဘဲ ကာရာဒိာုကေသီချင်းများဆိုပြီး ဒောာ်ဟစ်ဆူညံ နေ သည်များကို သက်ဆိုင်ရာဒာကြီးဒာကဲ များသိစေ ရန်တင်ပြဒာပ်ပါသည်။
ko aung on October 26, 2012 at 10:04 am
Yes, Not only from Nyaung done staff. some of army staff from pathein also going to Yangon or other place without permission.